Maxay ahaayeen Go'aanadii Rooble ee ka careysiiyay Farmaajo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay ahaayeen Go’aanadii Rooble ee ka careysiiyay Farmaajo?
Rooble ayaa sameeyay dhowr go'aan oo isdaba-joog ah, oo dhamaan aan ku qancin Farmaajo, kuwaasoo ugu dambeeyay xilka qaadistii Wasiirka Amniga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo markii la magacaabey sanadkii tagey, muddo billooyin ah Rooble wuxuu si dhaw ula shaqeynayay Farmaajo, iyadoo xiriirka labada dhinac fiicnaa.
Laakiin, wixii ka dambeeyay markii Rooble la wareegay mas;uuliyadda doorashadda iyo amniga bishii May 2021, waxaa is-bedelay xiriirkii labada mas'uul, oo hadda gaarey meel hoose.
RW Rooble ayaa bishii lasoo dhaafay qaadey tallaabooyinkii ugu horeysay ee ka careysiisay Farmaajo, waxaana ugu horeeyay diidmadii go'aankii Gollaha Wasiiradda looga joojinayay inay heshiisyo saxiixan inat Xukuumad kale ka imaanayso.
Go'aankii 2aad ee Rooble uu qaatay wuxuu ahaa booqashadii Kenya August iyo heshiiska uu lasoo galay Uhuru, ee lagu dhameeyay khilaafkii diblomaasi ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu Rooble Todobaadkii tagey xilka ka qaadey Fahad Yaasiin, oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka Ikraan Tahliil, waxaana sidoo kale uu shaqada ka ceyriyay Wasiirka Amniga Xasan Xundubeey, oo ku dhawaa Farmaajo.
Waxay ahaayeen dhamaan go'aannadan kuwa ka careysiiyay Farmaajo, oo hadda fowdo ka wada dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo kiiska Ikraan, oo dadkii dilka Gabadhan ka dambeeyay gadaal marsadey, isagoo ka difaacaya in cadaaladda la horkeeno.
Fahad oo dembiile ah ayuu difaac u noqday, kana door-biday danta qaranka iyo in cadaaladda shaqeyso, isagoo ka dhigay la-taliyihiisa amniga qaranka markii laga qaadey NISA.